Fahavotsoran’ny atidohan’ireo mpitora-bato – RN 2 : hanao fitokonambe ny kamiao sy taksiborosy | NewsMada
Fahavotsoran’ny atidohan’ireo mpitora-bato – RN 2 : hanao fitokonambe ny kamiao sy taksiborosy
Par Taratra sur 27/11/2017
Ho fanehoan’izy ireo ny tsy fahafaliany, noho ny namotsoran’ny Fitsarana ny atidohan’ireo jiolahy mpitora-bato ireo fiarakodia eny amin’ny lalampirenena faharoa, hanao fitokonambe ao Brickaville, rahampitso ireo mpitatitra (kamiao sy taksiborosy).
Nanapa-kevitra ireo taksiborosy sy kamiaobe mpitatitra entana amin’iny RN 2 mampitohy an’Antananarivo sy Toamasina fa hanao fitokonambe sy hanao sakana ao Brickaville rahampitso (raha tsy misy ny fiovana) manoloana ny fanapahan-kevitra noraisin’ny fitsarana tamin’ny famotsorana ireo olona atidoha mpikotrika ny fitorahana fiara ao Brickaville, araka ny fampitam-baovao voaray avy amin’ireo mpitatitra naneho ny alahelo momba ity raharaha ity. “Marobe ireo fiara efa nitondra faisana voatora-bato eo anelanelan’i Menagisa sy Andohanakoho Brickaville ary efa fantatra ireo atidoha mikotrika ity fanakorontanana ity nefa izao navotsotra izao indray izy ireo”, hoy ny fanazavan’ny mpamily taksiborosy iray.
Naneho ny alahelony koa ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena tamin’ny alalan’ny kaomandin’ny vondron-tobim-pileovan’ny zandarimariam-pirenena faritra Atsinanana, ny Kly Ralaikoa Tianarivo Gabriel Armandin amin’ny famotsoran’ny fitsarana ireo atidohan’ity fitorahana fiara ity. Miasa ny zandary ary tsy misambotsambotra olona fahatany fa efa vita fanamarinana avokoa ny nahafahana nisambotra ireo olona 11 tompon’antoka tamin’ity raharaha ity. “Raha izao fomba fiaraha-miasa izao dia ho reraka fotsiny hisambotra ny zandary ary ho sarotra ny fametrahana fandriampahalemana eto Toamasina. Niaiky rahateo ny telo tamin’ireo voasambotra fa mandray vola 15 000 Ar isaky ny avy mitoraka fiara. Ireo mpivady notondroin’ireo voasambotra no tena atidohan’ny fitorahana”, hoy hatrany ity manamboninahitra ity.
Mihantsy ny zandary ireo atidoha mpitoraka fiara…
Nohamafisin’ny loharanom-baovao hatrany fa mirehareha ary sahy mihantsy ny zandary ao Brickaville mihitsy ilay renim-pianakaviana atidohan’ilay fitorahana fiara fa tsy matahotra ary tsy sahin’ny fitsarana gadraina. Efa tafaverina ao Brickaville rahateo izy mivady ka izao mandrahona ny zandary izao. Mitaky fiaraha-miasa matotra amin’ny fitsarana hatrany anefa ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena amin’ny famongorana itony mpampihorohoro itony.
Raha hiverenena ity raharaha fitorahana fiara ity, andian-jiolahy miisa sivy mpitoraka fiara sy mpandrava taksiborosy no indray saron’ny zandary, ny 16 novambra 2017 alina. Noraisim-potsiny teo am-panaovana ny asa ratsiny ireto jiolahy ireto. Taorian’ny nahasamborana azy ireo dia nanondro ireo mpaniraka sy mpanakarama azy ireo jiolahy. Nilaza ry zalahy fa mikarama tahaka ny mpikarama rehetra ny anay satria omena vola arakaraka ny fiara voatoraka sy vaky fitaratra. “Ny entana azo amin’ny fandrobana kosa dia atolotra ireo mpaniraka sy mampikarama anay”, hoy hatrany ireo jiolahy nandritra ny famotorana azy ireo tao amin’ny borigadin’ny zandary ao Brickaville.
Ahina hampirongatra ny fitsaram-bahoaka indray ity raharaha ity tamin’ny famotsorana ireo olona atidohan’ity fitorahana fiara ity. Tsy milamina intsony ny raharaha eo anivon’ny fitsarana sy ny zandary? Vao tsy ela akory izay no navotsotry ny fitsarana avokoa ireo olona 11 nandravarava ny fitaovan’ny BNGRC sy ny fahalasamam-bahoaka teo amin’ny sakana fitiliana ny fahasalaman’ireo mpandeha mivoaka sy miditra ny Tanànan’i Toamasina.
Andrasana, araka izany, ity hetsika hokasain’ny mpamily taksiborosy ny ireo kamiaobe mpitatitra entana hatao ao Brickaville rahampitso ity.